lesona dihy an-tserasera - pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy
Keyword: lesona dihy amin'ny Internet
Nivadika ny fiainantsika manontolo i Corona. Mba hahafahantsika miverina amin'ny fiainana mahazatra tsy ho ela dia ilaina ny mijanona ao an-trano. Vokatr'izany, isika rehetra dia manana fifandraisana ara-tsosialy vitsy kokoa, mety tsy hiasa ao amin'ny orinasa intsony ary tsy afaka manenjika fialamboly marobe intsony.
Corona, tsy misy fialantsiny ho anay
Tsy afaka soloinay namana ianao na hiasa amin'ny mpanjifa. Saingy afaka mahazo antoka izahay fa mijanona ho zava-dehibe amin'ny tenanao ihany ianao. Zava-dehibe ny fanatanjahan-tena, mahatonga antsika hahatsapa ho tsara kokoa, falifaly ary mandanjalanja amin'ny ankapobeny
Tsy misy fialan-tsiny intsony ary miala amin'ny kilaon'ny corona
Raha ao an-trano tontolo andro ianao na izany na tsy izany dia matetika ianao no tsy manana antony manosika hanao programa fanatanjahan-tena ao amin'ny efitranonao, irery ary tsy misy fitarihana.
Na ho ela na ho haingana dia mahasosotra izany ary mihombo hatrany ny vaky. Nahemotra matetika kokoa ireo sampam-panofanana mandrapaha tsy mahomby tanteraka izy ireo na manomboka am-pahatsorana fotsiny ary avy eo nofoanana.
Ho fanampin'izay dia mandao ny trano ianao raha hiantsena na hanao raharaha lehibe. Mifanohitra amin'izay kosa, midika izany fa saika ny ankamaroan'ny olona mihinana kaloria mihoatra ny zakany.
Ary izany dia miharihary amin'ny jeans, blouse, lobaka ary T-shirt tery kokoa. Fantatsika rehetra izany. Isika tsirairay avy dia manana akanjo farafahakeliny farafahakeliny ao anaty efi-tranontsika izay nozairina mangingina kely kokoa ary tao anatin'ny indray alina monja.
Tianay ho very indray ny kilao corona, saingy tonga ny teboka fanentanana irery ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Amin'ny fotoana sasany dia lasa tsingerina mila vaky.
Ka inona no azonao atao mba tsy hahavery ny fahafinaretana sy fahafinaretana amin'ny fanatanjahan-tena?
Mazava fa tohizo, mazotoa hatrany, mahazoa izay tsara indrindra avy aminao ary indrindra: miavonavona amin'ny faran'ny fotoam-pampiofanana.
Mora kokoa ny milaza fa tsy vita, ny gym sy ny sekoly fandihizana dia voatery nikatona. Fa misy ny fanohanana matihanina. Toy ny ohatra amin'ny Sekolin'i D's Dance Sehatra lehibe no niniana natao hanohanana anao.
Ho hitanao eto ny lesona dihy mety amin'ny olona rehetra, na vao manomboka na matihanina. Azo ampiasaina amin'ny fomba rehetra ny choreographer. Ireo manam-pahaizana amin'ny fanao tianao.
Tsy mila manolo-tena amin'ny fomba iray koa ianao. Olona iray ianao tahaka ny dihy ho antsika tsirairay avy, noho izany dia manana fotoana ianao hanandramana ny tenanao ary hihoatra ny fetranao ary hitombo amin'izany.
Ireo fampianarana dia mety ho an'ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe.
Angamba hahafaly ny zanakao ny mahita dihy miaraka aminao. Rehefa dinihina tokoa, tsy fotoana sarotra ho antsika olon-dehibe io. Ny fampianarana any an-tokatrano dia mampifamatotra ny tanorantsika amin'ny tontolo manodidina antsika tahaka ny ataontsika.
Fantatsika rehetra fa ny sekoly dihy amin'ny Internet dia tsy afaka ary tsy hanolo ny fifandraisana mivantana mihitsy. Amin'izao fotoana izao anefa dia fomba tsara hijanonana hatrany.
Noho izany dia manana fialantsiny kely ianao ary misy vintana iray hafa. Omeo volo ny tenanao, zahao izany, midira ary mihatsara isan'andro. Ny fanatanjahan-tena bebe kokoa, ny fandanjalanjana bebe kokoa ary ny fahasambarana no tanjona irina indrindra.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 31. Janoary 2021 31. Janoary 2021 Sokajy freetime sy fanatanjahan-tenaKeywords Corona, tsy fisian'ny antony manosika, taranja dihy amin'ny Internet, lesona dihy amin'ny Internet, mandihy, kilasy fandihizana, sekoly dihy, sekoly dihy natolotra an-tserasera, lesona mandihyLeave a Comment mandihy fampianarana miaraka amin'ny tolotra an-tserasera - tsy misy fialan-tsiny intsony